महिला हिंसा देखाउने दाँत - ब्लग - प्रकाशितः पुस २, २०७६ - नेपाल
महिला हिंसा देखाउने दाँत
१३ औँ दक्षिण एसियाली खेल नेपालमै आयोजना हुँदा सबैभन्दा खुसी खेलाडी नै थिए । अझ उद्‍घाटन समारोहमा राष्ट्रिय झन्डा बोक्ने र खेलाडीका तर्फबाट शपथ लिन पाउने भाग्यशाली खेलाडीको खुसीको त सीमा नै भएन । राखेपले उद्‍घाटनको केही दिनअघि राष्ट्रिय झन्डा क्रिकेटका पारस खड्काले बोक्ने र शपथ तेक्वान्दोकी आयशा शाक्यले लिने जानकारी गराएको थियो । उद्‍घाटनको ग्रान्ड रिहर्सलमा पनि आयशाले नै शपथ लिएकी थिइन् । तर उद्‍घाटनको दिन बिहान झन्डा ओलम्पियन भारोत्तोलक कमलबहादुर अधिकारीले बोक्ने समाचार आयो । प्रतियोगितामा सहभागिता जनाउने खेलाडीमध्ये ओलम्पियन भए उसैले झन्डा बोक्ने प्रचलनअनुसार कमललाई त्यो मौका दिइयो । तर पारसलाई अब के गर्ने ? राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् समस्यामा पर्‍यो । झन्डा बोक्न नमिलेपछि राखेपले पारसलाई शपथका लागि तयार बनायो । उद्‍घाटन सुरु हुनुअघिसम्म पनि आयशा यसबारे बेखबर थिइन् ।
खेलाडीका तर्फबाट शपथ लिन पारस ट्रयाक सुटमा गए । मन्त्रीहरुलाई समेत दौरासुरुवाल कोट उपलब्ध गराएको राखेपले शपथ लिने खेलाडीका लागि पोसाकको व्यवस्था गर्न सकेन । साडीचोलोमा आएकी आयशा हेरेको हेर्‍यै भइन् । कार्यक्रमको समापनका बेला झन्डै ५ मिनेटको महिला हिंसाविरुद्धको अभियानको भिडियो सन्देश देखाएको राखेपले महिला खेलाडीलाई बिनाजानकारी शपथ लिनबाट हटाउँदाचाहिँ हिंसा भयो कि भएन होला !
प्रहरीले खेल हेर्ने कि दर्शकको सुरक्षा गर्ने ?
खेलकुदका ठूला प्रतियोगिता आयोजना गर्दा खेलस्थल सुरक्षाको जिम्मा प्रहरीलाई दिने नेपाली चलनै हो । यस पटकको सागमा पनि व्यापक संख्यामा प्रहरी परिचालन भए । प्याराफिटमा खटिएका प्रहरी दर्शकको सुरक्षामा कम र खेल हेर्नमा बढी व्यस्त हुन्थे । विदेशतिर सुरक्षाका लागि खटिनेहरु दर्शकतिर फर्केर बसेका हुन्छन् तर हामीकहाँ भने सबै सुरक्षाकर्मीको नजर खेलस्थलमा हुन्छ । हजारौँका संख्यामा खटाइएका भनिएका स्वयंसेवकको अत्तोपत्तो नहुँदा दर्शकले सिट खोज्न प्रहरीको सहयोग लिन खोज्दा पनि उनीहरुलाई त्यसबारे जानकारी हुन्नथ्यो ।
अझ बर्दी लगाएपछि सुरक्षाकर्मीलाई रंगशाला छिर्न पनि सजिलो र आफूसँगै चिनेजानेका लागि छिराउन पनि सहज भएको थियो । टिकट काटेर लाइन बसेका दर्शकलाई कुटुँलाझैँ गर्ने प्रहरीचाहिँ आफन्तलाई भने चोरबाटोबाट छिराइरहेका भेटिए ।
कहीँ नभएको जात्रा समापनमा
नियम मान्ने हो भने फुटबलमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता आयोजना हुँदा मैदानमा एक साताअघि नै कुनै पनि खेल गर्न पाइन्न । ओलम्पिक, एसियाड र सागजस्ता प्रतियोगितामा ट्रयाक एन्ड फिल्डका स्पर्धा हुँदा रंगशालाको ट्रयाकको प्रयोग मात्रै गर्न पाइन्छ । मैदानमा खेल्न पाइन्न । तर १३ औँ सागको समापनअघि नेपाल र भुटानबीच स्वर्ण स्पर्धा हुनुअघि दशरथ रंगशालामा रातारात मैत्रीपूर्ण फुटबल आयोजना भयो । त्यो पनि सांसद र संसद् सचिवालयका कर्मचारीबीच ।
सांसद र कर्मचारीलाई पहिल्यै रंगशालाभित्र छिराएर पासको टन्टाबाट राखेप मुक्त हुन खोजेको हो कि भन्ने भान परेको छ ।
त्यस्तै समापनका बेला नाइटिंगल स्कुलका विद्यार्थीले पनि मनमोहक प्रस्तुति दिए । तर काठमाडौँको चिसोमा कोरियोग्राफरले विद्यार्थीलाई अर्धनग्न भेषभूषामा उतारेर उनीहरुको सातो लिने काम गरे । झन्डै एक घन्टा चिसोमा कठांग्रिएका विद्यार्थी आफ्नो प्रस्तुति सकिएपछि बाक्लो र न्यानो कपडा खोज्न हतारिएका थिए । छात्राहरुलाई फुल स्लिभमा नचाउन मिल्दा छात्रहरुलाई चाहिँ किन अर्धनग्न पार्नुपर्ने रहेछ ? कहीँ नभएको जात्रा हाँडीगाउँमा यस्तैलाई पो भन्ने हो कि ?
सामाजिक सञ्‍जालका असामाजिक हामी
प्रचण्डका तीन जिब्रा
तिब्बतीलाई युरो पार्सल